Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers Oo Ka Shaqeynaya Saxiixyo Dhowr Ah. - jornalizem
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers Oo Ka Shaqeynaya Saxiixyo Dhowr Ah.
Tababaraha Liverpool Brendan Rodgers ayaa rajeynaya inuu soo gabagabeeyo saxiixyo dhowr ah ka hor inta aysan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda dhamaadka bisha August, waxaana uu ugu baaqay taageerayaasha inaysan aaminin wararka xanta ah ee ay qorayaan wargeysyada.
Tababaraha cusub ee Anfield ayaa la soo wareegay Fabio Borini mar sii horeysay xilli ciyaareedkan, waxaana sidoo kale uu rajo ka qabaa inuu la soo wareego ciyaaryahanka kooxda Swansea City Joe Allen, iyo weeraryahanka kooxda Fulham Clint Dempsey.
Liverpool ayaa sidoo kale laga yaabaa inay iska iibiso ciyaartoyda Andy Carroll iyo Alberto Aquilani si dhaqaalo ay ugu heleen saxiixyo cusub, waxaana Rodgers uu niyad wanaag ka muujiyay in ciyaartoy kale uu kooxda ku soo kordhin doono.
Waxa uu u sheegay website-ka Liverpool: “Shaqo badan ayaa jirta oo socota, oo ay wadaan maamulka kooxda, gaar ahaan Ian Ayre, shaqadaasoo ah mid qarsoon”.
“Xiriir joogta ah ayaan la leeyahay milkiilayaasheena Mareykanka, gaar ahaan Mike Gordon oo ka socda Fenway Sports Group”.
“Sida iska cad, marka ay kooxda tahay Liverpool qiimaha sarre ayaa loo qaadaa, laakiin waxaan mar walba dareemayay inay muhim tahay inaan heysano ciyaartoyda aan u baahanahay bilowga xilli ciyaareedka, huubaashii dhamaadka suuqa kala iibsiga sidaas ayuu xaalka noqon doonaa”.
“Waxaa jira warar badan oo la isla dhexmarayo. Waxaan arkay boqolaal ciyaaryahan oo lala xiriirinayo Liverpool, lakiin in yar oo ka mid ah ayaa u dhow inay halkaan yimaadaan, ama aan u dhawaanay inaan fiirino”.
“Nasiib darro taageerayaasheena waa inay aqriyaan oo ay qaatan. Lakiin fariinta aan wado ayaa ah in shaqo weyn ay socoto oo aan ku keeneyno saxiixyo dhowr ah, waxaana rajeyneynaa inaan soo gabagabeyno ka hor dhamaadka August”